Igumbi Lokuhlambela | May 2022
Umboniso Weentyatyambo Wase-Chelsea: Iindaba, Imikhwa Kunye Nenkuthazo
Isikhokelo Sokugqibela Sokuthenga Indlu Yakho Yokuqala
I-Blogger uJess Hurrell utyhila ngokuLungiswa kweGumbi lokuhlambela- Igumbi lokuhlambela lokuhlambela
Ukudityaniswa kombala omnyama kunye negolide, ubugcisa obungabonakaliyo kunye nezinto ezininzi zendlu - sisezulwini! Thatha ukhenketho kwiHomebeautiful.com/uk.
Iingcamango Zomgangatho Wangasese we-Baths ngo-2021 - Khetha i-Bathroom Flooring
Fumana ezinye izimvo ngemigangatho yokuhlambela kunye neenzuzo kunye nokuchaphazela nganye nganye, kubandakanya iithayile zomgangatho wokuhlambela, igumbi lokuhlambela IVinyl, igumbi lokuhlambela elingaphantsi kunye nokunye.
Iingcamango zangasese ezisezantsi - i-8 yeyonaGumbi lokuhlambela elincinci elincinci kunye neeNgcaciso zeCloakroom
Indlu yangasese esezantsi ihlala iyeyona ndawo incinci ekhaya, kodwa eso ayisosizathu sokusilela ukwenza ingxelo kunye negumbi lakho lokunxiba. Guqula indlu yangasese ngokusebenzisa le mibono yoyilo njengenkuthazo.
Ulijika njani igumbi lokuhlambela lakho libe yindawo yakho yobuqu
Ungayiguqula njani indawo yakho yokuhlambela iye kwindawo yokugqibela ye-spa? Ukuxhotyiswa ngeeshawa lokuphumla okanye ibhafu efudumeleyo, inokuba yeyona ndawo ingcwele onokuyiphumza kunye nezinto ezimbalwa ezongezelelweyo eziphoswe kuyo.
Iingcamango zangasese zangasese zekhaya lakho ngo-2021
Fumanisa ezona zimvo zilungileyo zangoku zokuhlambela iimpahla zeceramic, ifanitshala, izinto zobhedu, izixhobo kunye nokukhanya okuya kuthi kukhuthaze izimvo zakho zokuyila igumbi lokuhlambela ngo-2021.
Ukuphefumlelwa kwigumbi lokuhlambela -Izimvo ezingama-20 zeGumbi lokuhlambela e-UK
Ukhangela izimvo zangasese? Ukusuka kumagumbi okuhlambela amancinci ukuya kumagumbi amanzi, fumana indawo yokuphefumlela yangasese ekhayeni lakho ezi foto zikhuthazayo.
Ndingayisebenzisa iphepha lodonga kwigumbi lokuhlambela lam?
'Ukusebenzisa iphepha lodonga kwigumbi lokuhlambela yindlela entle yokongeza umbala kwigumbi elinokuthi ngamanye amaxesha lenzelwe ukusebenza kwengqondo.'
Izimvo zekhrisimesi yokuyila
uyilo lwezihlalo kwigumbi lokuhlala
uyilo lwegumbi kumantombazana akwishumi elivisayo
izityalo eziqhakaza iindawo ezinomthunzi